ससुराली घर गएर ससुरा बुबाको आशिर्वाद लिएर रवि लामिछानेले मनाए आज बुबाको मुख हेर्ने दिन ! - Hot Post News
ससुराली घर गएर ससुरा बुबाको आशिर्वाद लिएर रवि लामिछानेले मनाए आज बुबाको मुख हेर्ने दिन !
August 30, 2019 by onlinenews
कुशे औंशी तथा बाबुको मुख हेर्ने दिन आज जन्मदिने बाबुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै मनाईदै छ । आफूलाई जन्म दिई लालनपालन गरी हुर्काएकामा बाबुप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न पितृ दिवसका रूपमा मनाइने यस पर्वमा छोराछोरीले बाबुलाई सम्मान गर्ने चलन छ ।
बाबुको मुख हेर्ने दिनमा चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले आफ्ना ससुरा बा तथा राप्रपा नेपालका कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलबाट आर्शिवाद लिएका छन् ।गत सोमबार धरौ*टीमा रि*हा भएका रवि लामिछानेले कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग शनिवारबाट सञ्चालन गर्नेछन् । सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले राखेका तस्विर यस्ता छन्।
Prevरवि लामिछानेको ‘क्रेज’ देखेपछि रविको पूर्व पत्नी इशाले भनिन्: ‘मान्छेको चपाउने दाँत छुट्टै र देखाउने दाँत छुट्टै हुन्छ भन्थे हो रहिछ’